पोखरा– फेवाबजार www.Fewabazar.comडटकम इकमर्सले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि अफर भित्रको अफर अन्तर्गत १ रुपैयाँमा इयर फोन दिने भएको छ । माघ महिनामा अफर भित्रको अफर अन्तर्गत १ रुपैयाँमा १ किलो चिनी दिएको फेवाबजारले फागुन महिनामा १ रुपैयाँमा एउटा इयर फोन दिने घोषणा गरेको हो ।फेवाबजारले फागुन ५ गतेदेखि १७ गतेसम्म दिने अफर भित्र यो अफर दिएको […]
टोकियो।क्यूएस रेमिटले बिगत बर्षहरमा झैँ यो बर्ष पनि गोल्ड दशैं र तिहार नामक अफर
लिएर आएको छ। नेपाल बजार प्रबन्धक सोम गुरूंगका अनुसार २०१८ अक्टोबर १ तारिक सोमबार
देखि लागू हुने गरी प्रत्येक हप्ता १ जनालाई लक्की ड्र मार्फ़त बिजय घोषणा गरिने छ। दशैंको उपलक्ष्यमा ३ जना र तिहारको उपलक्ष्यमा ३ जना गरी जम्मा ६ जना भाग्यमानी […]
सौल संसार रेमिट प्रा.लि. र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड बीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा संसार रेमिटको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्र कान्त आचार्य र सिद्धार्थ बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर प्रसाद कडेलले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । सम्झौतापछि Rupeesend Remittance कोरियाबाट पठाएको रकम सिद्धार्थ बैंकका देशभरी रहेका ७००० भन्दा बढी भुक्तानी केन्द्र […]
सौल। हिमायन बैंकले कोरियामा रहेका नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर विशेष सुविधा दिने भएको छ। दक्षिण कोरियाको क्यूएस रेमिट संग सहकार्य गरेको बैंकले क्यूएस रेमिटमा रकम डिपोजिट गरेपछि नेपालको हिमायन बैंकमा सिधै भूक्कानी सेवा दिने भएको हो। यसले कोरियामा रहेका नेपालीहरूलाई ठुलो राहत मिल्ने बैंकको विस्वास रहेको बताईएको छ। नेपालको सबैभन्दा उत्कृष्ठ बैंकको रूपमा परिचित हिमायन बैंकको […]
काठमाडौं–हिमालयन बैंक लि. र एनएनपी कोरिया कम्पनी लिमिटेड (क्युएस रेमिट) बीच रेमिट्यान्स सेवा सम्बन्धि सम्झौता भई रेमिट्यान्स कारोबार शुरु भएको छ । दक्षिण कोरियाको दोङ्देमुन स्थित एनएनपी कोरिया कम्पनी लिमिटेड (क्युएस रेमिट)को केन्द्रिय कार्यालयबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्ता मणि सिवाकोटी तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमसेर जबराको उपस्थितीमा रेमिट्यान्स कारोबारको शुभारम्भ […]
काठमाडौ । वलिउडकी सुपरस्टार श्रद्धा कपूरले सगुनको बहुप्रतिक्षित एप सार्वजनिक गर्ने निश्चित भएको टुइट् मार्फत खुलासा गरेकी छिन । सगुनले पनि यस भन्दा अघि नै जनवरीको दोस्रो साता बहुप्रतिक्षित एनड्रोइट भर्सनमा एप सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो । सगुनले आधिकारिक रुपमा केही नबताए पनि सुपरस्टार कपुरले टुइट्मा जनाएअनुसार नोबेम्बर ९ तारिक भारतको राजधानी नयाँ डिल्लीमा सगुनको […]
सौल। हानपास रेमिट्यान्स कम्पनीले उच्च प्रविधीयूक्त सेवा मार्फत रेमिट्यान्स सेवा दिने बताएको छ। हानपासले आफ्नो सेवा लिन चाहने ग्राहकहरूको लागी अत्याधुनिक प्रविधीको भरपुर उपयोग गर्दै ‘एडभान्स एप’को माध्यामबाट सेवा दिन लागेको बताएको छ। पछिल्लो समय अन्य रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले अनलाईन भन्दा अफलाईन सेवालाई प्राथमिकतामा राखिरहेको सन्दर्भमा हानपासले भने अनलाईन सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। हानपासको ‘एडभान्स एप’ […]
सौल। सन् २०१८ मा दक्षिण कोरियाले ३ लाख मानिसहरूलाई रोजगार दिन सक्ने बताएको छ। एसियाको चौँथो ठुलो अर्थतन्त्र कोरियाले आगामी बर्ष ३ प्रतिशत आर्थिक बृद्दि हुने पनि प्रक्षेपण गरेको छ। कोरिया बिकास ईन्सिच्युटका अनुसार कोरियाले निर्यातमा आशा गरे अनुसारकै लक्ष्य भेट्न सक्नेछ।
मेगा बैंकले ६० दिने अवधिको लागि मुद्दति निक्षेपमा १० प्रतिशत व्याजदर तोकेको छ। माछापुच्छ्रेले पनि ९० दिने अवधिको निक्षेपका लागि त्यति नै व्याजदर दिनेगरी व्यक्तिगत मुद्दति योजना ल्याएको छ। सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले अझ माथि पुगेर ११ प्रतिशत व्याजदर दिनेगरी एक वर्षे योजना ल्याएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले चाहेअनुसारको रकम राख्न मिल्नेगरी १० प्रतिशत व्याजदरको वार्षिक […]
नयाँ दैनिकी /सौल। दक्षिण कोरिया सरकारले प्रतिघण्टा ज्याला ७५३० वन पुर्याए सगैँ ‘पार्ट टाईम’ काम घट्ने देखिएको छ। वर्कर पोर्टलले गरेको एक सर्वेक्षणमा पार्ट टाईम काम लगाउने मालिकहरूले यस्तो बताएका हुन्। उनिहरूले तलब धेरै दिनुपर्ने भएकोले पार्ट टाईमर वर्करको संख्या घट्ने बताएका हुन्। सर्वेमा सोधिएका मध्ये ७९ प्रतिशतले ज्याला महंगो भएको बताएका थिए। राष्ट्रपति मुनजे […]
नयाँ दैनिकी बिशेष व्युरो। दक्षिण कोरियामा हुण्डी कारोबारमा संलग्न २६ बिदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरूमा १२ जना नेपाली नागरिक र १४ जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेको कोरिया प्रहरीको अपराध शाखाले जनाएको छ। ‘अपराध अपरेशन’ नामक यो कार्वाहीको नतिजाले कोरिया सरकार समेत चकित परेको बताईएको छ। हुण्डी कारोबारको आरोपमा यस अघि पनि नेपाली […]
जिएफसीको लगानी सम्बन्धी सेमिनारको मिती सर्यो,अब नयाँ वर्ष पछि हुने
८ डिसेम्बर २०१७,सिओल ।ग्लोबल फ्रेन्डसिप क्यापिटल (GFC) लिमिटेडले यहि डिसेम्बर १० तारिख आइतबारका दिन गर्ने भनिएको सामुहिक लगानीको अवसर तथा चुनौतीबारे सेमिनार सर्ने भएको छ ।विविध कारणवश र बिशेष कोरियामा रहेका संघ संस्थाको कार्यक्रम लाई मध्यनजर गर्दै सारिएको जानकारी गराउँदै अंग्रेजी नयाँ बर्ष पछि लगतै अर्को मिती तय गरिने GFC कम्पनि संचालक समितिका अध्यक्ष तथा […]
बिल गेट्सलाई पछाडी पार्दै जेफ बेजोस बने विश्कै सबैभन्दा धनी
अमेजन इंकका कोफाउन्डर जेफ बेजोस विश्वकै धनी व्यक्ति बनेका छन्। बेजोसले विश्वकै धनी व्यक्तिको सूचीमा एक नम्बरमा रहँदै आएका बिल गेट्सलाई शुक्रबार पुनः एकपटक पछाडि पारेका हुन्। फोर्ब्स पत्रिकाको रिपोर्टअनुसार विश्वकै ठूलो अनलाइन रिटेलर कम्पनी अमेजनको सेयरमा शुक्रबार १३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएसँगै कम्पनीका कोफाउन्डर जोसेफको सम्पत्ति १० अर्ब २० करोड डलर बढेको छ। अब उनको […]
एनआईसी बैँकको ३० करोड रुपैयाँ ह्याक गरेको रहस्य सार्वजानिक
काठमाडौँ । विदेशी ह्याकरहरुले नेपालका वाणिज्य बैंकहरुलाई निसाना बनाउन थालेको समाचार बाहिर आइरहेको बेला मुलुककै प्रतिष्ठित बैंक एनआईसी एसियाको ३० करोड रुपैयाँ ह्याक गरेको रहस्य बाहिर आएको छ । लक्ष्मी पूजाको दिन बेलुकि बैंक बन्द गर्दा मुलुकभरकै शाखाको अवस्था दुरुस्त भएको रिपोर्ट सबै शाखा कार्यालयले बैंकका कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाललाई दिएको भए पनि आइतबार बिहान […]
काठमाडौँ: दशैँपछि उच्च बिन्दुले बजार बढेको आज पहिलो पटक हो । धितोपत्र बजार मंगलबार दोहोरो अंकले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार बजार ४६.६२ अंकले बढेको छ। दोहोरो अंकले बजार बढ्दा नेप्से परिसूचक एक हजार ५६४ बिन्दुमा पुगेको छ। बजारमा लगानीकर्ता सम्हालिएर लगानी गर्न थालेको तथा राजनीतिकरुपमा पनि निर्वाचनको माहोल बनेकाले विश्वास बढेको विश्लेषण गरिएको […]
बर्दिबास – तिहार र छठ पर्व नजिकिएसँगै महोत्तरी जिल्लाका गाउँनगर बस्तीमा माटाका भाँडाको बिक्री बढेको छ । तिहार र छठ पर्वमा कलश, दियो, घडा (गाग्रो) र छ्याँची (दही जमाउने भाँडा) र ढकनासहित नयाँ माटाका भाँडा प्रयोग गरिने मैथिल परम्पराअनुसार जिल्लाका गाउँनगर बस्तीका बजारमा माटाका भाँडाको बिक्री बढेको हो । वर्षभरि अन्य बेला खासै प्रयोगमा आउन […]
भारतबाट तिहारका लागि पाँच करोडको स्याउ आयात
मोरङ – फलफूल व्यवसायी संघका केन्द्रीय सदस्य नागेन्द्र दासका अनुसार ७५ ट्रक अर्थात् एक करोड ५० लाख कार्टुन स्याउ तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरेर मोरङका व्यापारीले भारतबाट आयात गरिएको छ । भारतको हिमाञ्चल, कास्मिर र चीनबाट व्यापारीले स्याउ आयात गर्ने गरेका छन् । पूर्वाञ्चलमा ५० भन्दा बढी स्याउका अधिकृत बिक्रेता र तीन हजार खुद्रा […]
कृषि बजेट सदुपयोग हुन सकेन
काठमाडौं: कृषि विकास मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादवले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा कृषिका लागि विनियोजित बजेट दुरुपयोग भएको बताएका छन्। उनले कृषिका लागि विनियोजन गरिएको बजेट सोही शीर्षकमा खर्च गर्न स्थानीय निकायलाई सुझाव दिए । ‘मैले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छु’, उनले भने, ‘कृषिको बजेट अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति […]
रूपिज सेन्ट रेमिटले दशैँको टिका देखि कोरियाबाट कारोबार थाल्ने
सौल। रूपिज सेन्ट रेमिट्यान्सले आज दशैँको टिकाको दिन देखि कोरियाबाट कारोबार थाल्ने भएको छ। पछिल्लो समय कोरिया सरकारले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई कारोबारको अनुमती दिए संगै रूपिज सेन्ट रेमिट्यान्सले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर कारोबार थाल्ने भएको हो। यो रेमिट्यान्समा कोरियाली र नेपाली लगानी कर्ताहरूको लगानी रहेको छ।सस्तो र छिटो सेवा दिने यो रेमिट्यान्सको मुख्य उदेश्य रहेको सो […]
सिरिजङ्गा साङ्गितिक सौगात भाग ४ को तयारी अन्तिम चरणमा
कृष्ण बस्याल/सौल।सिरिजङ्गा साङ्गितिक सौगात भाग ४ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यक्रम सफल बनाउनको निमित्त सम्पुर्ण कामको बाड्फाड गरि त्यसै अनुसार काममा आयोजक लागि परेर काम गरिरहेको आयोजकले नयाँ दैनिकीलाई बताएको छ । कार्यक्रम सभ्य र भब्य बनाउन एक सय भन्दा बडि स्वयंसेवक परिचालन गरिने जानकारी किरात याक्थुङ चुम्लुङ दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष सुन्दर […]